'Chucky' Ayaa Doortay Doorka Dhalin Yarada iyo Sharka Charles Lee Ray - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Chucky' Ayaa Doortay Kaalinta Da 'yarta iyo Sharnimada Charles Lee Ray
Been sheegi maayo, waxaas oo dhan Chucky wararka ayaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ka socda dhulka naxdinta leh. SYFY-da Chucky waxay umuuqataa inay qarax dhaceyso oo hadaad tixgeliso in Don Mancini uu arintaan kor u qaadi doono, waxaan nahay gabi ahaanba gangbusters. Rad ugu dambeeyay ee Chucky news, ka dib markii trailer hore u weyn oo aan la wadaagnay horaantii toddobaadkan, waa shubay da 'yar oo shar ah Charles Lee Ray.
Soo noqo, 2019's soo baxayo ayaa waana xumaan qaan-gaar ah, oo qaadan doonta doorka Charles Lee Ray Chucky. David Kohlsmith wuxuu qarka u saaran yahay inuu galo maskax kale oo xun caruurta. Wuxuu gabi ahaanba iska lahaa argagaxa soo baxayo ayaa. Waan hubaa inuu halkan ku sameyn doono wax la yaab leh.
Intaan qof walba maskaxdiisa ka lumin. Waxaan rabaa inaan tilmaamo in Brad Dourif uu markale cod siin doono Chucky. Waxyaabaha qaangaarka ah ee Charles Lee Ray waxay noqon doonaan wax gebi ahaanba ka duwan.
Dulucda sheekada Chucky waxay u dhacdaa sidan:
Ka dib markii gurigii loo yaqaan 'Chucky doll doll' uu ka soo muuqday iibinta deyrka magaalada, magaalo aan caadi ahayn oo Mareykan ah ayaa lagu tuuray fowdo iyada oo dilal taxane ah oo argagax leh ay bilaabeen inay soo bandhigaan munaafaqadda iyo qarsoodiga magaalada. Dhanka kale, imaatinka cadawga iyo xulafada Chucky ee la soo dhaafay wuxuu ku hanjabayaa inuu banaanka soo dhigayo runta ka dambeysa dilka, iyo sidoo kale asal jinka caruusadda asal ahaan sida ilmo caadi u muuqda oo si uun u noqday bahalkan caanka ah.
Chucky's taxane sideed-taxane ah oo laga soo saaray USA Network iyo SYFY oo bilaabanaya Oktoobar 12. Miyaad ku faraxsan tahay xulashada dhalinyarada Charles Lee Ray? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Brad dourifCharles Lee RaychuckyDavid Kohlsmithdon manciniSyFyShabakadda Maraykanka